Rehefa mihabe ny karazany COVID-19 dia miova ny saron-tava amin'ny fiaramanidina
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Rehefa mihabe ny karazany COVID-19 dia miova ny saron-tava amin'ny fiaramanidina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Saron-tava amin'ny fiaramanidina
Eritrereto fa vonona ny hiditra ny fiaramanidinao ianao satria misaron-tava? Tazomy, mety tsy ampoizina ianao. Tsy mahazo aina ny manidina amin'ny sarontava tarehy amin'ny sidina lava. Matetika ny mpandeha sasany dia mandany ora maro ao amin'ny trano fidiovana mba tsy hisaron-tava. Tsy ampoizina ny fandraràna ny fanaovana sarontava amin'ny Delta Variant izay miteraka tranga COVID-19 vaovao.
Fantatrao ve fa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsirairay dia manana fahaizana mamaritra tsy hoe raha saron-tava fotsiny no tsy maintsy atao fa karazana sarontava endrika inona no tsy maintsy anaovana rehefa eny ambony sidina?
Fantatrao ve ny mahasamihafa ny N95 sy ny saron-doha amin'ny lamba raha oharina amin'ny FFP2 tsy misy valizy?
Ny ankamaroan'ny olona manao sarontava tarehy, ka inona no hotafinao raha voarara ny sarontava vita amin'ny lamba?
Mihamaro ny zotram-piaramanidina manomboka mandrara ny saron-tava vita amin'ny lamba, milaza fa tsy sakana kalitao amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 izy ireo, indrindra manoloana ny firongatry ny tranga vaovao isan'andro manerantany noho ny Delta variants. Izy ireo dia mila maska ​​fandidiana, saron-tava N95, saron-tava FFP2 tsy misy valizy, na saron-tava respirator FFP3.
Hatreto, Lufthansa, Air France, LATAM, ary Finnair dia nandrara ny saron-tava lamba ary koa saron-tava izay manana valves valves. Eritrereto izany. Ny sarontava misy fofonaina dia toy ny fiara reraka. Tsara ho an'ny mpamily (na amin'ity tranga ity ny mpitafy), fa ahoana ny amin'ny olona rehetra any ivelan'izany? Ny sarontava dia tsy sarontava tsy sarontava.
Tamin'ity herinandro ity, Finnair no lasa mpitatitra farany nandrara ny saron-tava lamba eny an-tsambo, tsy masaka fandidiana ihany no sarona, saron-tava FFP2 tsy misy valizy, ary saron-tava N3, hoy ny bitsika nataon'ny orinasa.
Ny zotram-piaramanidina mitaky sarontava ara-pitsaboana - farafahakeliny telo sosona - dia Air France sy Lufthansa. Ny LATAM dia hamela ny sarontava KN3 sy N95 ihany koa. Ary ho fitandremana fanampiny, ho an'ireo mpandeha mampifandray ao Lima, dia tsy maintsy avo roa heny izy ireo ary manampy amin'ny sarontava hafa. Ny anton'izany dia satria i Peru izao dia manana ny tahan'ny fahafatesan'ny COVID-95 ambony indrindra eto an-tany.
Any Etazonia, ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mamela saron-tava lamba fa kosa nandrara karazana firakofana tarehy hafa toy ny bandana, sarondoha, saron-tava ski, mpandeha an-tsehatra, balaclava, sarontava misy lavaka na fisaka samy hafa, saron-tava misy valves fanary, na saron-tava lamba mihitsy aza. raha vita amin'ny sosona iray ihany izy ireo. Ny olona sasany dia manao ampinga plastika, fa amin'ny United Airlines, nilaza izy ireo fa tsy ampy ny fandrakofana azy ary mbola mila saron-tava amin'ny tampon'ny ampinga. Ao amin'ny American Airlines, tsy avelan'izy ireo ny sarontava izay mifandray amin'ny fantsom-pandrefesana na fantsom-batana.
Ny US Security Security Administration (TSA) dia namoaka fepetra takiana amin'ny saron-tava rehefa mandehandeha amin'ny fitateram-bahoaka rehetra, ao anatin'izany ny fiaramanidina sy ny seranam-piaramanidina, ny volana Janoary 2021. amin'ny tranga COVID-13 noho ny Delta Variants, ny nitarina ny mandat hatramin'ny 18 Janoary 2022.
Daniel Cannon hoy:
20 Aogositra 2021 amin'ny 08:06
Ao ny angona. Tsy mandeha ny saron-tava! Atsaharo ny tahotra.
Araho ny siansa!
Mahatonga ny Ranomasina mandoto, miteraka areti-mifindra bakteria rehefa mampiasa sy miaro ny mpanao heloka bevava!